Dispensary Internet Kushambadzira uye Injini Yekutsvaga Optimizaton
Dispensary Kushambadzira kweInternet
Maitiro ekuvimbisa ako ekushambadzira madhora ari kuunza mune vatsva vatengi.
Kune nzira dzakawanda dzinoshambadzirwa nemabhizimusi madiki kuunza vatengi vatsva kusanganisira, redhiyo, TV, mabhodhi emabhodhi, magazini uye dispensary internet kushambadzira. Dambudziko rinotarisana nemaneja ezvitoro ndeyekuti unganyatso kuzivisa nzira ipi yekushambadzira iri kushanda. Kunze kwekunge iwe ukabvunza wese mutengi mutsva anouya nepamusuwo iwe unozoziva sei kuti ndeipi nzira iri kukuunzira iwe, vatengi vatsva? Ruzivo urwu rwakakosha mukukudza bhizinesi rako nekuti rinobvumidza mamaneja kugovera mari yakawanda kune izvo zviri kushanda uye chengetedza mari pazvirongwa zvekushambadza izvo zvisingashande. Kunze kwesarudzo dzese dzinozivikanwa dzekushambadzira, Google ndiyo yega inopa data risingarambike pane huwandu hwevatengi vari kutsvaga bhizinesi rako kuburikidza nekutsvaga kweinternet. Google inopa kuverenga kwemwedzi pamwedzi chaiko kwenhamba yevatengi vanodzvanya nzira kuenda kuchitoro chako pamwedzi. Ichi chiratidzo chakanakisa chekuti vangani vatengi vatsva Google iri kupa bhizinesi rako uye inokupa metric yakasimba kuti uverenge kushambadzira kwako kushambadzira maringe nekudzoka pane purofiti.
Ngatikuratidzei muenzaniso weumwe wevatengi vedu anovaraidza mbanje dispensary iri muTacoma Washington. Mumufananidzo pazasi tinopa skrini kana mutengi achitsvaga ma dispensaries mu Tacoma Washington uye osarudza Green Collar Cannabis. Mune kona yepamusoro-kurudyi pane bhatani rinoti mafambiro. Kana mutengi angodzvanya bhatani iro rinovatora kuenda kumepu inovapa madhairekisheni kubva kwavari ikozvino akananga kubhizinesi rako. Izvo zvisingazivikanwe nevaridzi vazhinji vebhizimusi ndeyekuti Google inoteedzera ZVESE nguva iyo mutengi anodzvanya bhatani. Kwete chete ivo vanochengeta huwandu hwevanhu vanodzvanya bhatani iro asi ivo vanoteedzera WHERE ivo varipo. Iyi data rakakosha risingakwanise kupihwa nechero ipi sarudzo yekutengesa.
Chimwe chinhu chakakosha kuti unzwisise ndechekuti chete Nyowani mutengi anozobaya bhatani bhatani nekuti vatengi varipo vanenge vatoziva nzira yekuwana bhizinesi rako muzviitiko zvakawanda. Ivhareji purofiti pakutengesa kwema dispensaries mazhinji ari madhora masere pamutengi. Uye ini ndinokuyeuchidza kuti izvi zvinongova chete kana mutengi akaita kutenga kumwe uye akasazombodzoka uye isu tinoziva kubva zvino metric kuti yekuvaraidza mbanje dispensaries ine chengetedzo chiyero cheinenge 8 muzana kune iyo kukosha iri chaizvo yakanyanya kukwirira. Ona chinyorwa chedu: Yakawanda zvakadii iyo dispensary mutengi akakosha.
Nekuwedzera huwandu hwevatengi vanoratidzwa pakuparara uku tinouya nevatengi vatsva vanosvika 1129 vakaunzwa kuburikidza neGoogle Kutsvaga bhizinesi iri. Uye chengeta mupfungwa izvi ndezveGoogle chete, haina kusanganisira Bing uye mamwe mainjini ekutsvaga. Kana tikawanza 1129 x * 8.00 tinowana $ 9,032 madhora mubatsiro pamwedzi. Iye zvino nhamba iyi yakanyanya kukwirira nekuti havazi vese vanotsvaga bhizinesi rako vanodzvanya bhatani renongedzo. Vamwe vanopinda kero yacho zvakananga mumasisitimu avo ekufamba kana kuwana madhairekitori kubva kune wechitatu webhusaiti. Iyo poindi yechinyorwa chino kuratidza kuti kuisa mari muKutsvaga Injini Kugadziridza ndeimwe yesarudzo dzinonzwisisika yekusimbisa kuyerera kwevatengi nyowani. Kwete chete iyo Google inokupa iwe nenhamba asi ivo vanokupa iwe nenzvimbo dzekunobva vatengi vako. Kana iwe ukaona nzvimbo yeguta rako iyo iwe yaunoda kunongedza iwe unogona kuve neako SEO yakasimba kuwedzera mamwe mazwi ekuwedzera kuti uunze kunyangwe imwe mari. 93 muzana yekutsvaga kwese kwemuno kuve neGoogle uye kana bhizinesi rako risiri kuratidza pane peji rekutanga vese vatengi vacho vari kuenda kune vako vanokwikwidza.
At Iseresearchic.com edu mapurogiramu eSEO anotanga nemadhora madhora mazana mashanu emadhora uye tinovimbisa basa redu. Kana isu tikasawedzera huwandu hwevatengi vanouya kuburikidza nemikova yako iyo inosimbiswa newe kuburikidza neGoogle Console isu tinoshandira mahara kudzamara isu padiki nepakati kuwanda kwako kuri kuuya kwevatengi kuverenga. Taura nesu nhasi nezvemahara SEO odhita uye isu tinokupa iwe yemahara yemukwikwidzi mushumo uye keyword ongororo kune rako bhizinesi. A $ 500 emadhora kukosha.
Vedu Vatengi Google Mhedzisiro
Yakawanda zvakadii iyo Leafly uye Weedmaps Charge?
Dispensary SEO Chokwadi